येल्प मा विज्ञापन? | Martech Zone
हामीले भर्खर हाम्रो अफिसको मालिसेजलाई मद्दत गरिरहेका छौं (हो - हामीसँग साँच्चिकै एउटा छ!) किन्ने कि नगर्ने निर्णय गर्नुहोस् येल्प मा विज्ञापन उनको बढावा दिन राम्रो लगानी थियो यहाँ इंडियानापोलिस मा स्पा, शान्त अनुभव। मोनिकले येलपमा आफ्नो उपस्थितिबाट केही खुट्टाको ट्राफिक पहिले नै हेरिरहेको थियो, त्यसैले येलपमा सायद विज्ञापनले अझ बढी उत्पन्न गर्दछ।
विज्ञापन प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा, विज्ञापन प्याकेज एकदम बलियो छ। पहिले, मोनिक उनी जस्तै व्यवसायको लागि प्रासंगिक, येल्पको स्थानीय खोजीहरूमा समर्पित विज्ञापन प्राप्त गर्दछ। येल्पले अरू व्यवसायलाई कहिले पनि प्रमोट गर्दैन - केवल उनी मात्र - खोज परिणाम पृष्ठमा:
साथै, विज्ञापन प्रतिस्पर्धीहरूको व्यापार पृष्ठहरूमा चल्नेछ:
अन्तमा, Yelp ले मोबाइल उपकरणहरूमा प्रमुख रूपमा विज्ञापनहरू पनि चलाउँदछ:
येल्प प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उनीहरूको स्थानसँग तुलना गरेर, अन्तरिक्षमा उनीहरूको स्थितिमा हिंड्ने एक उत्तम काम गरे पहेंलो पृष्ठहरू, ट्रिप सल्लाहकार र एन्जीको सूची (हाम्रो ग्राहक) यसलाई अवलोकन गर्न, उनीहरूले यो गुगल ट्रेंड्स चार्ट प्रदान गरे:
व्यक्तिगत रूपमा मैले सोचेँ कि यो अलि भ्रामक थियो। यो चार्टले साइटहरूका लागि वास्तविक खोजी परिमाण गणना देखाउँदछ ... मोनिकको व्यापार जस्ता सर्तहरूको लागि खोजी आवश्यक पर्दैन। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ कि खोज ("मालिश इन्डियानापोलिस"), खोज परिणामहरू बिभिन्न छन् - सँग एन्जीको सूची Yelp र पहेंलो पृष्ठ माथि गुगल व्यवसाय परिणामको साथ पृष्ठमा प्रभुत्व प्रदर्शित:
अन्तमा, हामीले येल्प विज्ञापनको लागि मूल्य प्राप्त गर्‍यौं। लागत निषेधजनक थिएन, र येलपले ग्राहकको साथ उत्पादन गरेको कस्टम भिडियो पनि समावेश थियो। प्रतिनिधिले हामीलाई सूचित गरे कि जब त्यहाँ एक भिडियो छ, त्यहाँ%% उच्च रूपान्तरण छ। मूल्य निर्धारणको सवालमा यसलाई वार्षिक सम्झौताको आवश्यक थियो। यदि मोनिकले नतिजा प्राप्त गरिरहेको छैन भने, चाँडै बाहिर निस्किनु पर्ने भिडियो भिडियोको लागत बाहेक भुक्तानको २ महिना थियो। अर्को शब्दहरु मा, यो मोनिक एक हजार हजार डलर खर्च हुन सक्दछ यदि विज्ञापन काम गरीरहेको थिएन।
हामीले त्यो मोनिकलाई सिफारिस गरेका छौं छैन विज्ञापनको साथ अगाडि बढ्नुहोस् ... किनभने हामीले सोच्यौं कि येल्प विज्ञापनले काम गर्दैन, तर वार्षिक संलग्नताको लागि आवश्यकताको कारण। तीस दिनको परीक्षणले यो परीक्षण गर्न सक्दछ यदि रूपान्तरण दर मोनिकको लागि उनको क्यालेन्डर भर्न पर्याप्त नयाँ व्यवसाय चलाउँदछ भने। जहाँसम्म, यदि त्यसो भएन भने, वार्षिक सम्झौताको आवश्यकताले उनको नयाँ व्यवसायलाई तहसनहस पार्न सक्छ - जब उनलाई अत्यधिक राजस्व चाहिन्छ।
तपाईंले प्रयोग गर्नुभयो येल्प विज्ञापन? तपाईंको अनुभव कस्तो थियो?
टैग: एन्जीको सूचीस्थानीय खोजीस्थानीय खोज विज्ञापनस्थानीय खोज विज्ञापनसमीक्षाभुकनुचिल्ला समीक्षा
मार्क्स 24, 2013 मा 8: 43 PM
एक विज्ञापन असफल को लागी कि एक मूल्य ट्याग को लागी कुनै नयाँ व्यापार चिल्ला बनाउन को लागी।
डिसेम्बर १, २०१ 25 2017:२:8 अपराह्न
मैले भर्खरै येल्प विज्ञापनहरूको लागि साइन अप गरेँ र उनीहरूले मलाई फोन गरे र उनीहरूले मलाई बोलाए पछि म यो गर्न सक्दिनँ र मैले कुनै पनि काम पाइन र पहिलो महिना मैले क्लिकको गुच्छाको लागि +००+ डलर चार्ज गरें र मैले कुनै पनि ग्राहकलाई येलपको कुनै ग्राहक छैन भनेर पनि बोलाइन जब मैले येल्प विज्ञापन रद्द गर्‍यो जब उनीहरूले मलाई येल्प सेवाहरूको लागि २ 300 डलर चार्ज गर्‍यो र तिनीहरू स्वतन्त्र याल्प व्यवसाय मानिन्छन् भन्ने घोटाला हो मैले अधिक कलमा पुनर्जीवित पार्ने थिएँ जब म स्वतन्त्र भएँ। त्यसोभए जब मैले पहिलो महिना तिरेको थियो र त्यो लेनदेनको लागि मैले खेलाडी गरेनन उनीहरूले यो मेरो खाताबाट लिए कि उनीहरूले मलाई मेरो कार्ड चार्ज गरेको थाहा दिएर बाहिर निकाले।
म कति संघर्ष गर्दैछु भन्ने जानेर उनीहरू अझै अघि बढे र यो गरे
मार्क्स 24, 2013 मा 9: 53 PM
यदि तपाईंले व्यक्तिलाई एक बर्षको लागि साइन इन गर्नुपर्‍यो भने, त्यसोभए तपाईं के बेच्नुहुन्छ त्यसमा तपाईंलाई कम विश्वास छ। म दस फिट पोल संग छुन छैन।
येल्पले मलाई भने कि यो न्यूनतम years450० / महीनाको दुई वर्षको करार हो
अगस्ट,, २०१ 27 2013:२१ अपराह्न
धन्यवाद जिम हार्ट। तपाईंले भनेको भनेको धेरै सान्दर्भिक थियो र बाँकी टिप्पणीहरू र पोष्टको साथ, म उनीहरूसँग विज्ञापन गर्ने छैन। तिनीहरूले मेरो सबैभन्दा वफादार ग्राहकहरूबाट समीक्षा पनि फिल्टर गरेका छन्। म एक्यूपंक्चुरिस्ट हुँ र व्यावासायिक मामिलाहरूको बारेमा थोरै थाहा छ, त्यसैले मलाई मेरो निर्णय लिन मद्दतको लागि अनुसन्धानमा भर पर्दछु। तपाई एकदम सहि हुनुहुन्छ। यदि उनीहरूलाई के प्रस्ताव थियो भन्नेमा विश्वास थियो भने, तिनीहरूले तपाईंलाई एक महिनाको लागि प्रयास गर्न दिनेछन्। फेरी धन्यबाद, ट्रेसी स्टर्डिभन्ट
मार्स 25, 2013 मा 6: 09 एएम
उत्कृष्ट पोस्ट डग। मैले येल्पलाई ग्राहकहरुका लागि एकदम नजिकबाट हेरेँ र हाम्रा प्रतिनिधिहरुसँग वार्षिक सर्तहरू र कति सौदा हत्याराको बारेमा स्पष्ट कुरा गरेँ। मलाई शंका छ कि हामी चाँडै नै अन्य विकल्पहरू देख्न सक्दछौं, विशेष गरी यस्ता पोष्टहरू सहित।
मार्क्स 25, 2013 मा 2: 39 PM
तपाईंको गुगल नेतृत्व अनुसरण गर्‍यो; खाना र पेय येल्पको बाहेक अन्यत्र पनी येलो पेजले यसको डाउनगर्ल सर्पिल सबै वर्गहरूमा जारी राख्छ। डल्गको स्थितिलाई सुदृढ पार्ने देखिन्छ किनकि येल्प मुश्किल स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा दर्ता भयो र तिनीहरूको समीक्षाले यूपीको विस्तारिक रूपमा उनीहरूको एकमात्र जनसांख्यिकीय हो भनेर देखाउँदछ।
अप्रिल 30, 2013 मा 2: 51 PM
म Yelp बाट मजबूत-हतियारको बारेमा गुनासो धेरै साना व्यवसाय सुनेको छु। एक बिक्री प्रतिनिधि तपाईं कल र पिच दिन्छ र यदि तपाईं वार्षिक विज्ञापन को लागी साइन अप गर्न इन्कार गर्नुभयो, तपाईं आफ्नो5सितारा रेटिंग अब आफ्नो होम पेज मा देखा पर्दैन देख्नुहुनेछ। तिनीहरू फिल्टर वा तल फिल्टर गरिएका छन्। यो पछिल्लो months महिनामा कम्तिमा small साना व्यवसाय (सामान्यतया १- people व्यक्ति) को साथ भयो। र मैले केहि पृष्ठहरू जाँच गरें (एउटा जहाँ मैले लेखें र मेरो star स्टार समीक्षा फेला पार्न सकेन) र त्यस फ्रन्टमा केही हिन्की देखिन्छ।
यो सत्य हो कि उनीहरूले मलाई के गरे।
२ का लागि टी
मैले १ महिनाको टर्मिनेसन शुल्कको साथ months महिनाका लागि हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे। सत्यवादी रूपमा6महिना भित्र मात्र दुई सोधपुछ ल्याएको छ। उनीहरू भन्छन् त्यहाँ विज्ञापन संग एक स्नोबल प्रभाव छ तपाइँ अधिक समय देख्नुहुनेछ। जसले मलाई केवल त्यहाँ केहि म्याट्रिक्स सोच्न लगाउँदछ कि तपाईंको विज्ञापनहरू राम्रो समयमा देखाउनुहोस् उदाहरणका लागि जब तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ कि म मार्न शुल्क खानेछु र मेरा पैसाहरू मार्केटमा राखेको छु। तिनीहरूले पहिले नै मेरो सबैभन्दा प्रासंगिक समीक्षाहरू फिल्टर गरे! ओह राम्रो।
म यो लेख पाउँदा धेरै खुसी छु। म येल्पको साथ विज्ञापनको लागि दृढ विचार गर्दैछु तर म १ बर्षको लागि साइन गर्न पनि हिचकिचाउँदिन। मलाई १ महिना अवधि शुल्क सहितaमहिनाको विकल्प दिइयो, तर भिडियो विकल्प हटाइयो। येल्पको अर्को पीपीसी विकल्प छ जसको लागि मैले सट्टा तिर झुकाएको अनुबन्धको आवश्यक पर्दैन। जे होस्, मलाई सूचित गरियो यदि म पीपीसीको साथ जान्छु, म विज्ञापनको लागि साईन अप गर्न सक्दिन। मलाई धेरै अनौंठो लाग्छ ..
मार्क्स 31, 2014 मा 9: 03 PM
मेरो व्यवसायको लागि पैसाको सबैभन्दा ठूलो अपशिष्ट। म मेरो Yelp पृष्ठ को लागी 10 गुणा धेरै यातायात प्राप्त जैविक र मुक्त को लागी भुक्तान विज्ञापन को माध्यम बाट क्लिकहरु को लागी।
मैले आज बिहान येल्प रिपसँग कुरा गरें। म Portland मा एक dayspa को मालिक हो वा एक महिला शो हुँ। मलाई लाग्यो कि येल्प फीस खगोल हो र एक बर्षको करार पागल हो। जबकि म वास्तवमै येल्पको साथ विज्ञापन गर्न चाहन्छु, म $$० / मो को तिर्न चाहन्न। प्रत्येकले पहिले नै यहाँ पोस्ट गरेका मूल्यहरू र विभिन्न सम्झौताहरू सहि छन्। एउटा अर्को कुरा मैले सोधेको भिडियो थियो। जे होस् उनीहरूले यो भिडियोको लागि भुक्तानी गरिरहेको छ (सही, हामीलाई वास्तवमै थाहा छ कि हामी यसको लागि भुक्तान गर्दैछौं)। यदि तपाईं तपाईंको व्यवसाय वेबसाइटमा भिडियो प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले फोटोग्राफरबाट भिडियो किन्नु पर्छ। यद्यपि हामीले यसको लागि भुक्तानी गरिरह्यौं, यो प्रयोग गर्नको लागि हाम्रो होइन।
त्यहाँ प्रति क्लिक भुक्तान विकल्प छ, तर, यो एक $ २०० / मासिक मिनेट हो। र मलाई पक्का विश्वास छैन कि तपाईं यसमा क्याप राख्न सक्नुहुन्छ।
अवश्य पनि तिनीहरू भन्छन् कि तपाईं शीर्षमा भएको कारण, सबै व्यवसाय तपाईंको आउँदैछ, वस्तुतः ग्यारेन्टी। हो ... होईन। यदि उनीहरूले वास्तवमै सोचेका थिए भने, त्यसो भए त्यहाँ वार्षिक सम्झौताको आवश्यक पर्दैन। म यसको सट्टामा भिडियोको लागि छुट्टै भुक्तानी गर्नेछु र मेरो आफ्नो मासिक बजेट सेट गर्नुहोस् तब (यदि तपाईंसँग एउटा सम्झौता छ भने) month महिना, month महिना, १ वर्ष अनुबंध उचित न्यूनतम बजेटको साथ।
माफ गर्नुहोस्, मेरो लागि कुनै येल्प विज्ञापन छैन, अहिलेको लागि।
म एक व्यवसाय संग काम गर्दै छु कि केवल yelp बाट प्रति महिना कम्तिमा new नयाँ ग्राहकहरु आउँदछ। यो सबै निर्भर गर्दछ!
मार्क्स 31, 2014 मा 9: 02 PM
तर कसरी तपाईं कसरी निश्चित हुन सक्नुहुन्छ ती new नयाँ ग्राहकहरू भुक्तान गरिएको विज्ञापनबाट आउँदैछन् तिनीहरूको नि: शुल्क येल्प सूची बनाउने? तपाईंसँग कुनै विचार छैन किनकि तपाईं भुक्तान गरिएको विज्ञापनहरू र नि: शुल्क सूची बनामका रूपान्तरणहरू भिन्न पार्न सक्नुहुन्न।
मार्क्स 31, 2014 मा 7: 28 PM
येल्प बिलकुलै माफिया जस्तो छ। म केहि भ्रमित साना व्यवसाय मालिक होइन जो छाप आधारित विज्ञापनहरूबाट सीपीसी जान्दैनन्। मेरो सल्लाहको पहिलो शब्द: कुनै पनि परिस्थितिमा येल्पको साथ विज्ञापन नगर्नुहोस्। तिनीहरू चोरहरू हुन् (वास्तवमा शैतानसँग मिल्दोजुल्दो) जो केवल तपाईं डटेड रेखामा हस्ताक्षर गर्न चाहानुहुन्छ ताकि उनीहरूले तपाईंलाई उनीहरूको सम्झौतामा फसाउन सक्छन् र त्यसपछि तपाईंलाई डरलाग्दो सेवा दिन सक्छन्। मैले येल्पको विज्ञापन प्रतिनिधिहरूमा गुनासो गरेको छु कि उनीहरूको विज्ञापन क्लिकले एक भन्दा बढी अवसरहरूमा बिल्कुलै दुब्लो गर्दछ। मैले प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया प्रत्येक पटक उस्तै थिए। डिम्विट गरिएको येलप सेल्सपर्सनले मलाई केहि तथ्या .्कहरू पठाउँदछ कि कसरी मेरो येल्प पृष्ठले एक्स स number्ख्याहरू प्राप्त गरिरहेको छ, yelp पृष्ठबाट मेरो वेबसाइटमा क्लिक गर्ने व्यक्तिको संख्या, मोबाइल दृश्यहरूको x संख्या, र Yelp सौदाहरूको X नम्बर। तिनीहरू संचार गर्न असफल हुन्छन् कि यी सबै तथ्या्कहरू सशुल्क येलप विज्ञापनसँग धेरै थोरैमा छन्। यो धेरै जसो मेरो नि: शुल्क येल्प पृष्ठ सूचीको परिणाम हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यदि मसँग मेरो वेबसाइटमा free०० नि: शुल्क मासिक येल्प दृश्यहरू छन् भने (येलपको साथ विज्ञापन गर्नु अघि गुगल विश्लेषक संख्यामा आधारित) र त्यसपछि म click० क्लिक थ्रुहरू (दिमागमा राख्नुहोस्) यी मेरा Yelp पृष्ठमा क्लिकहरू हुन्, बिना हो। सम्भावित ग्राहकले मलाई कल गर्ने वा अर्डर गर्ने ग्यारेन्टी), येलप सेल्स रिपले किन ती तथ्या t्कहरू टाउट गर्दै छन् जस्तो कि मैले त्यो मेरो भुक्तान गरिएको विज्ञापनको परिणामको रूपमा प्राप्त गरिरहेको छ ??? किनभने उनीहरूका धेरै जसो ग्राहकहरू साना व्यवसायका ग्राहकहरू हुन् जसले धेरै विज्ञापनका लागि राम्रो जानकारी दिदैनन् र तिनीहरू केवल विश्वास दिलाउन भ्रममा पार्दछन् कि बिना भुक्तानी याल्प विज्ञापन बिना नै यी सबै टाढा जान्छ।
यी व्यक्तिहरू साँचो स्क्याम कलाकारहरू हुन्। हो, येल्प नयाँ व्यवसायको राम्रो स्रोत हो जुन मैले पहिलो स्थानमा भुक्तान गरिएको विज्ञापनको लागि साइन अप गरेको कारण थियो। यद्यपि, मुख्य कुरा यो हो कि तिनीहरूको विज्ञापन प्याकेजहरू कूल चीर हुन् जुन येलपलाई मात्र फाइदा गर्दछ, विज्ञापनदातालाई होइन। तपाईंलाई थाहा छ? येलप बिक्री मानिसहरूले तपाईंलाई उनीहरूको फोन नम्बर उनीहरूमा पुग्न दिदैनन्? तपाईंसँग तिनीहरूलाई कल गर्ने कुनै तरिका छैन। तिनीहरूले केवल तपाईलाई कल गर्न सक्दछन्। तपाईं तिनीहरूलाई ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ, तर तिनीहरू दिनका लागि प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन्। त्यसोभए जब उनीहरू अन्तमा कल गर्छन्, र तपाईंले कल कुज मिस गर्नुभयो तपाईंलाई थाहा छ सानो व्यवसाय चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईंसँग तिनीहरूलाई पनी बोलाउने कुनै तरिका छैन। यो अगाडि बढ्न सक्छ। स्पष्ट रूपमा यी बिक्री व्यक्तिहरू यति व्यस्त छन् कि उनीहरूसँग आफ्नो भूमिका, आफ्ना ग्राहकहरूको औचित्य प्रमाणित गर्ने मानिसहरूसँग कुरा गर्न समय छैन।
एक पटक मेरो विज्ञापन अनुबंध सकिए पछि, मसँग फेरि साइन अप गर्ने कुनै तरिका छैन। कुल घोटाला। नि: शुल्क Yelp सूचीको साथ छडी। यो भुक्तान विज्ञापन र यसको नि: शुल्क भन्दा धेरै राम्रो काम गर्दछ।
अप्रिल 21, 2014 मा 3: 35 PM
ठिक छ। येलप नो बुएनो। तिमि के सुझाव दिन्छाै?
अप्रिल 21, 2014 मा 4: 58 PM
मँ अझै पनि येल्प, फेसबुक र गुगल + मा पृष्ठ भएको सिफारिश गर्दछु ... तर येलपमा उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा विज्ञापन गर्ने कुरा निश्चित छैन। यदि तपाईं एन्जीको सूचीमा सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूसँग त्यहाँ सबैभन्दा धेरै मूल्यवान दर्शकहरू छन् र प्रदायकहरू र ग्राहकहरूबीच मध्यस्थताको उचित तरीका छ।
मई 3, 2014 मा 9: 42 PM
के तपाईं नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्न येल्प प्रयोग गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ वा केवल तपाईंको अवस्थित ग्राहकहरूको लागि तपाईं पहुँच गर्न सजिलो बनाउने? एक Yelp प्रयोगकर्ता को रूप मा, म यीलाप को लागी नयाँ खोज को लागी को लागी मेनू र फोन नंबर खोज को व्यापार को लागी पहिले नै थाहा छ र मा जान। जे होस्, मैले भन्न खोजेको छु कि मैले कहिले पनि विज्ञापनमा क्लिक गरेको छैन र जब म विज्ञापन देख्छु, म अनुमान लगाउँछु कि यदि तपाईंले येलपमा विज्ञापन गर्नुपर्दछ भने तपाईंको उत्पादन राम्रो हुनुहुन्न।
नोभेम्बर २०, २००। 19::2014 अपराह्न
म निश्चित छु कि त्यो सम्भावना छैन!
डिसेम्बर १, २०१ 28 2014:२:9 अपराह्न
दुर्भाग्यवस, मेरी श्रीमतीले भर्खरै उनको स्थानीय कपाल स्टाइलिंग व्यवसायको लागि एउटा विज्ञापन चलाइन्। येल्पले दावी गर्‍यो कि दुई दुई हप्तामा उनको विज्ञापनमा १०० क्लिकहरू थिए। हामीले कुनै तरिकाले भनेनौ, मेरी श्रीमतीसँग सेल फोन छ, ब्यापार र एक कल होइन! उनीसँग star स्टार येल्प साइट छ जसले तीन महान समीक्षाका साथ उनीले कसरी शून्य कलहरू पाउन सक्दछन् जुन वास्तवमै उनको विज्ञापनमा क्लिक गर्न पर्याप्त रुचि राख्दछ?
वास्तवमा दुर्गन्धको अंश यो छ कि येलपले हामीलाई प्रति क्लिक $ 3.50 चार्ज गर्‍यो!
हामीले मुठीभर क्लिकहरू भन्दा धेरै प्राप्त गर्न कहिले पनि आशा गरेनौं (हामी सोच्छौं कि क्लिक गणना धोखाधडी हो) र कल्ट क्लिक गरेकोमा एक सभ्य प्रतिशत (१०--10०%)।
कुनै कल कुनै ठूलो सम्झौता भएको र केही हदसम्म अपेक्षित हुने थिएन, तर जब येल्पले १०० क्लिकहरूको लागि हामीलाई शुल्क लिन चाहान्दैन।
येल्पको समर्थन टोलीले सुझाव दियो कि हामीले येलप पेज र व्यवसाय विवरणमा केहि सुधार गर्न सक्दछौं। मानिएको 0+ क्लिकबाट ०% कल दर वर्णन गर्न यसले केहि गर्दैन।
हामी अब येल्पबाट बाहिर चाहन्छौं, उनीहरूले हामीलाई भन्छन् कि हामीले अघिल्लो महिनाको १ th औं दिनमा रद्द गर्नुपर्‍यो।
हामीलाई कसरी निकाल्ने र कुनै राम्रो सुझावहरू अरू साना व्यवसाय मालिकहरूलाई प्लेग जस्तो येलपबाट बच्न कसरी सकिन्छ भनेर कुनै सुझावहरू।
यदि उनीहरूसँग तपाइँको जाँच खाता जानकारी छ र स्वचालित निकासी गर्न…। म त्यो खाता रद्द गर्नेछु र एउटा नयाँ खोल्छु। जब उनीहरूले तपाईंलाई कानुनी कारबाहीको धम्की दिन्छ ... तपाईंको फोन रेकर्डको प्रमाण राख्नुहोस् जालसाजी देखाउनका लागि। त्यो म के गर्ने थियो। अवश्य पनि तपाईले अदालतमा गुमाउन सक्नुहुन्छ ... वा रद्द गर्नुहोस् र जरिवाना तिर्नुहोस्। म येल्पलाई घृणा गर्दछु। हामी व्यवसाय मालिकहरूले झगडा गर्नु आवश्यक छ।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 21::2015० अपराह्न
हामी पानी र मोल्ड ईमेडीएशन कम्पनी हौं र हामी येल्पको साथ विज्ञापन गरिरहेका छौं। राम्रो परिणामहरू र १ बर्षको अनुबन्ध होइन। यसको शीर्षमा, तिनीहरूले बहानाका साथ हाम्रा केही राम्रो समीक्षा हटाए जुन तिनीहरू नक्कली हुन सक्छन्। तपाइँ उनीहरूसँग तपाइँको पैसा बर्बाद गर्न सिफारिस नगर्नुहोस्।
नोभेम्बर,, २०१ at 2::2015 बिहान
यो महान जानकारी हो। मेरो अनुहारको किताबमा पनि त्यस्तै समस्या थियो। तिनीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरे।
फेब्रुअरी १,, २०११ 4:१:2016 अपराह्न
म पनि एक सानो व्यापार छ, म एक पाँच सितारा रेटिंग थियो, यो एक ग्राहक थियो जुन मैले काम गरें, र उसले मलाई चिनेन वा मसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध भएन जुन उसको रायलाई प्रभावित पार्छ, त्यसले उसलाई एक कारण दिन्छ। स्वेड रेटिंग।
मलाई यो धेरै राम्रो समीक्षा दिन उसले आफ्नै अधिकारमा लिए। उनले आफ्नो धारणाका लागि विशिष्ट कारणहरू उल्लेख गरे र उनलाई कामको क्षेत्रको ज्ञान थियो। समीक्षामा केहि पनि थिएन जुन यस्तो देखिन्छ कि यो पक्षपातपूर्ण राय बाहेक केही होइन।
येलप बिक्रीले भुक्तान गरिएको प्रोग्राममा मलाई बेच्न कोसिस गरेपछि, म धेरै विनम्रतापूर्वक धेरै बिक्री कलहरूमा नकार्न अस्वीकार गर्दछु।
अस्वीकार पछि मेरो पाँच तारा हरायो। यो अब सिफारिश गरिएको सेक्सनमा थियो। उहाँ मेरो समीक्षा मात्र हुनुहुन्थ्यो। मैले येल्पलाई सम्पर्क गरेँ र मेरो केसमा भनेँ कि "सिफारिस गरिएको छैन" भन्ने शव्द गलत छ र सम्भावित ग्राहकले "सिफारिस नगरिएको" शब्द देखे पछि उनीहरू विश्वास गर्दछन् कि यो नकारात्मक समीक्षा हो र व्यवसाय सिफारिस गरिएको छैन र अगाडि बढ्नेछ।
मेरो केस बताइसके पछि मैले सोचे कि केहि हुनेछैन भनेर म खुशी थिए उनीहरूले पंचतारांकित मूल्या rating्कन समीक्षा पोस्ट गरेकोमा खुशी भए।
तब उनीहरूले मलाई फेरि भुक्तानी गरेको कार्यक्रम बेच्न कोशिस गरे पछि, र फेरि मैले अस्वीकार गरें। त्यसोभए के अनुमान लगाउनुहोस्, मेरो पाँच तारा रेटिंग फेरि तल झिकियो।
यस अवधिमा म ग्राहकहरूलाई मलाई समीक्षा गर्न भन्नेछु। कसैलाई विश्वास लाग्यो कि उनीहरूले समीक्षाको लागि समय लिनेछन्। कुनै अन्य पूनरावलोकनहरू मेरो पृष्ठमा फेरि देखाईएन। मैले अन्तमा महसुस गरें कि समीक्षाले यसलाई पृष्ठमा बनाइरहेको छैन। त्यसैले अब म ग्राहकहरु लाई चिल्ला को लागी उल्लेख छैन।
मार्क्स 23, 2016 मा 1: 55 PM
ओह साँच्चै? हिजो मलाई उनीहरूबाट केहि उच्च दबावको कलहरू थिए। तिनीहरूले मलाई बारम्बार कल गरे I 3२325 को टोपीका साथ cap महिनामा मन्जुर गरें - मलाई चिन्ता छ कि मैले अहिलेको लागि साइन अप गरेको हुन सक्छु।
Rock solid वेब देव
मार्क्स 30, 2016 मा 3: 51 PM
म उनीहरूसँग विज्ञापनको बारेमा सोचिरहेको थिएँ, तर उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले महिनौंसम्म मलाई फोन गरिरहेछन् जुन मलाई अनौठो र जस्तो कि पसिलो लाग्यो।
अप्रिल 6, 2016 मा 11: 14 PM
मलाई पनि भयो!
अप्रिल 7, 2016 मा 9: 34 एएम
नगर्नुहोस्, केवल अरूले भने जस्तै, येल्पको साथ विज्ञापन गर्नुहोस्!
तपाइँले साइन अप गराउनको लागि उनीहरूले केहि पनि भन्छन तर तपाइँले कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुने छैन!
येलपमा तपाइँको आफ्नै नि: शुल्क सूचीमा परिवर्तन गर्नबाट तिनीहरूले तपाइँलाई रोक्दछन्!
तिनीहरूले मेरो अनुमति बिना मेरो खाता चार्ज गरे पछि उनीहरूले धेरै पटक उनीहरूलाई त्यसो नगर्ने आश्वासन दिए!
मैले बिक्री व्यक्तिहरूबाट असंख्य कलहरू प्राप्त गरें जसले भने कि उनीहरूले येल्पमा विज्ञापन गरेको मैले देखें र म उनीहरूको कम्पनीसँग विज्ञापन गर्ने प्रयास गर्नेछु कि भनेर हेर्न चाहान्छु, वा उनीहरूको कम्पनी एसईओको लागि प्रयोग गर्दछु।
यसले प्रमाणित गर्दछ कि येल्पले क्लिकहरू निगरानी गर्दैन र निश्चित गर्दछ कि मैले खोजी गरेकोमा र मेरो सेवा प्रयोग गर्नमा उनीहरूले दावी गरेको अनुसार इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मात्र पैसा दिन्छु! !!
कुल खण्ड / कम्पनी!
मैले आफ्नो विज्ञापन प्रकाशित गर्नु भन्दा पहिले मैले कहिले स्वीकृति पाइनँ
तिनीहरूसँग मेरो लोगोको सट्टामा यसमा अनियमित चित्रहरू छन्
उनीहरूले मलाई 30० दिन भित्र भुक्तान गर्न बिल कहिले पनि पठाएन, मेरो बैंक डेलाई १ चार्ज गर्‍यो !!!!
(सबै कुरा तिनीहरूले झूटा बारेमा)
.. मैले प्रबन्धकसँग कुरा गरें, उनले भने, "बिलकुलै, हामी तपाईको खातामा यी परिवर्तनहरू ल्याउँदछौं" (things कुराहरु जुन गलत थियो, मेरो सेवा क्षेत्र सहित) "हामी तपाईले प्राप्त गरिरहेको सेवामा खुशी भएको चाहान्छौं। "
..तै कुन बिन्दु मैले उनलाई के परिवर्तनहरू गरें भनेर सोधें (फोन बन्द गर्नु अघि, उसले बुझेको कुरा निश्चित गर्न चाहान्छ) ऊ हामीले एउटा कुराको नाम राख्न सकेन जुन हामीले छलफल गरिसकेका छौं!
उसले सुन्न पनि सकेन! मैले सोचे कि मैले उनलाई पृष्ठभूमिमा कुरा गरेको सुनें (किन मैले उनलाई मलाई पछि मलाई दोहोर्याउन भनें)
RUN! यो केटा एक "मूर्ख भिजोर" हो
उहाँ उनीहरूलाई यी स्क्याम कलाकार राक्षसहरूलाई प्रशिक्षण दिनुहुन्छ!
यस छायादार कम्पनीको साथ विज्ञापन नगर्नुहोस्!
तिनीहरूले मलाई $ 375 charged शुल्क लगाए र मैले केवल मेरो वेबसाइटको बारेमा १ sales बिक्री कलहरू प्राप्त गरें, एक सम्भावित ग्राहकबाट एक कल होइन! प्रतिस्पर्धीहरू पनि निगरानीित छैनन् र सम्भवत तपाइँको विज्ञापन क्लिक गर्दै!
मैले अब मेरा सबै पाँच तारांकित समिक्षाहरू हटाएको छु धन्यवाद!
अप्रिल 19, 2016 मा 5: 35 PM
सुझावहरूको लागि धन्यबाद - म yelp सशुल्क विज्ञापनमा विचार गर्दै छु। कति समय तपाई विज्ञापनको लागि तिर्नुभयो? म सोध्न सक्छु, तपाईले यसमा कति लगानी गर्नुभयो?
अप्रिल 25, 2016 मा 9: 28 एएम
हाम्रो व्यवसायसँग एकदेखि पाँच स्टार समीक्षा सहित विभिन्न प्रकारका समीक्षाहरू पनि थिए। एक तारा समीक्षा स्पष्ट रूपमा असंतुलित व्यक्ति द्वारा लेखिएको थियो जसले भाँडामा लिइरहेका थिए र वास्तवमा हाम्रो व्यवसाय भ्रमण गरेका थिएनन् र थ्रेस ru थियु वास्तविक ग्राहकहरुबाट आएका थिए।
मैले विनम्रतापूर्वक येल्प विज्ञापन कलहरू अस्वीकार गरें (केही हप्तामा धेरै), र चार र पाँच तारा समीक्षा लुकेका थिए, केवल एउटा तारा समीक्षा छोडेको। उनीहरूले दावी गर्छन् कि उनीहरूले समीक्षा रद्द गर्छन् जुन कानुनी छैन, तथापि एक तारा समीक्षा एक समीक्षाकर्ताले केवल त्यो समीक्षाको साथ दिइएको थियो, जबकि पाँच मध्ये एक मध्ये एक समीक्षाकर्ताबाट थियो जुन उनीहरूको प्रोफाइलमा धेरै समीक्षाको साथ थियो।
तिनीहरू झूटो हुन्छन् र चोरहरू छन्। म तिनीहरूलाई कहिले पनि एक प्रतिशत तिर्ने छैन, र कहिले पनि तिनीहरूलाई उपभोक्ताको रूपमा स्थानीय पसलहरूको खोजी गर्न प्रयोग गर्ने छैन। म मेरो उपभोक्ता शक्तिसँग मतदान गर्छु - कृपया त्यो साइट कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस्! अधिक व्यक्ति जो यस भ्रमणलाई वेवास्ता गर्छन्, उनीहरूले कम दृश्य पाउनेछन्, र आशा छ कि तिनीहरू व्यापारबाट बाहिर जान्छन्।
अप्रिल 25, 2016 मा 10: 59 एएम
त्यसैले मैले यसलाई हेरें र एउटा तारा वास्तविक थियो। यो ठीक छ, हामी यस्तो उद्योगमा छौं जहाँ एक तारा सामान्य छ। यद्यपि एक तारा समीक्षा को कानूनी थियो, यो अझै अनौंठो थियो कि येलपले केवल त्यो राख्नको लागि छान्छ, जबकि उच्च भुक्तानहरूबाट छुटकारा पाउँदा हामी भुक्तान गरिएको विज्ञापनहरू लाई "होईन" भन्यौं। Yelp yuck।
अप्रिल 25, 2016 मा 7: 30 PM
येल्प विज्ञापनको साथ अविश्वसनीय अनुभव, कहिले सोचेको छैन यो ठूलो ब्राण्ड कूल घोटाला हुनेछ। तिनीहरूले तपाइँलाई एक बर्ष लामो सम्झौतामा लक गर्छन्, यहाँ वर्णन गरिएको धेरै, विज्ञापनहरू कसरी गरिरहेको छ भनेर भुल्नुहोस् वा एक पटक तिनीहरूले तपाईंलाई बोर्डमा पाउँदा विज्ञापनहरू कसरी गरिरहेका छन् वा फलो अप गर्दछन्।
धेरै छायादार बिक्री रणनीति, झूटा प्रतिज्ञाहरू, एक घोटालाबाहेक अरू केहि पनि छैन!
तिनीहरूको पीपीसी टेक्नोलोजी पनि धेरै नै प्रश्नस्पद छ, असम्बन्धित सेवाहरूको लागि कलहरू भयो र उनीहरूसँग भएका तथ्या completely्कहरू पूर्ण रूपमा गलत थिए।
कलहरू किन व्यवसायसँग असम्बन्धित हुन्छन् भनेर सोध्दा उनीहरू भन्छन् कि व्यवसाय एक निश्चित कोटीमा छ र त्यस श्रेणीमा आउने आगन्तुकले विज्ञापन देख्न पाउँछन्, जसले प्रमाण दिन्छ कि उनीहरू केवल क्लिकहरू चाहन्छन् र विज्ञापनहरू प्रस्तुत गर्ने हेरचाह गर्दैनन्। ग्राहक जुन वास्तवमै तपाईंको सेवा खोज्दै छ।
धेरै बेइमान, पासोमा नपर्नुहोस्, टाढा रहनुहोस्!
मई 11, 2016 मा 3: 17 PM
सहमत हुनुहोस्, मलाई पनि त्यस्तै गर्नुभयो, मेरा सबै पाँचवटा तारा लिनुभयो किनकि म तिनीहरूसँग हस्ताक्षर गर्न चाहन्न, हामी के गर्छौं? यो ठगी हो।
मई 25, 2016 मा 2: 26 एएम
पैसाको जम्मा अपशिष्ट म पुन: प्राप्ति गर्छु कि सबैले यो शब्द निकाले कि यी व्यक्तिहरूले के गरिरहेछन् भन्ने कुराको कुनै जानकारी छैन र मलाई लाग्छ उनीहरूसँग कर्मचारीहरू विज्ञापन डलर प्रयोग गर्न विज्ञापनमा क्लिक गर्छन्। क्रेग सूची मलाई कति पटक को लागी १०० पटक प्रतिक्रिया पायो? यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्?… .केहि कारणका लागि क्र्याग सूची विज्ञापनहरू नि: शुल्क छन्। यी व्यक्तिहरू चोरहरू साधारण र साधारण छन्।
मई 29, 2016 मा 1: 01 एएम
येल्प विज्ञापनको साथ मैले एउटा डरलाग्दो अनुभव अनुभव गरेको छु। ती महँगो छन्। तपाईं एउटा सम्झौताको मा लक हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई चाँडै समाप्त गर्न धेरै पैसा तिर्नु पर्छ। मैले यस विज्ञापनबाट कुनै राम्रो नतिजा प्राप्त गरेन। कृपया मैले गरे जस्तो उस्तै गल्ती नगर्नुहोस्। तपाइँको विज्ञापन डलर कहीं खर्च गर्नुहोस्।
जुन 3, 2016 मा 6: 51 PM
म वास्तवमै यसको लागि गएँ। दर्दनाक पीडादायी…। र म PR / मार्केटिंग पेशेवर हुँ। म धेरै धेरै Elaine को भावना प्रतिध्वनि। "प्रति विज्ञापन क्लिक गर्नुहोस्" दर उत्तम रूपमा अलि अस्पष्ट छ - बिक्री प्रतिनिधिले मलाई भन्छ कि यो लगभग $ would हुनेछ - $ १० प्रतिस्पर्धीहरूमा निर्भर गर्दछ (अधिक पीप्स डब्ल्यू / समान बिजले यसलाई ड्राइभ गर्छ) जब यो वास्तवमा १$ / क्लिकको बारेमा थियो। । Months महिना भन्दा बढि त्यहाँ एक रूपान्तरण थिएन। तिनीहरूको एल्गोरिदम गम्भीर ट्वीकिंगको आवश्यकता छ - यल्पले हाम्रो विज्ञापन डेलिभर गर्ने छ जब मान्छेहरूले असम्बन्धित सेवाहरूको लागि खोजीहरू गरे। अचम्म मान्नु पर्दैन यसले चुस्यो…। को लागी एक विज्ञापन "बेकरी" को लागी एक विज्ञापन चाहान्छ जब तिनीहरूले "बार" खोजी गरेको छ।
यदि मैले यो सँगै ल्याउन सकें भने म वास्तवमा ठगीको लागि मुद्दा हाल्न सक्छु ... यो खराब छ।
जुन 24, 2016 मा 1: 29 PM
म येल्पको लागि साइन अप गर्दछु र उनीहरूले मलाई दिएको एक मात्र विकल्प १ बर्षको सम्झौता हो। Months महिना पछि, म from 1$6 मासिक शुल्क तिर्न थकित भएँ जबकि म तिनीहरूबाट कुनै नयाँ ग्राहकहरू पाइरहेको छैन। त्यसैले म एक महिना को लागी रद्द गर्न को लागी कोशिश गरीरहेको छु। उनीहरूले भने कि म 375० दिनको नोटिस दिन पर्छ र early early०० प्रारम्भिक टर्मिनेसन शुल्क तिर्नु पर्छ। के कसैलाई थाहा छ के हुन्छ यदि मैले तिर्न अस्वीकार गरें?
म एउटा सानो व्यवसाय मालिक हुँ। मैले भर्खरै yelp सँग मेरो सम्झौता पनि रद्द गरें। हामीले भुक्तान गरेको पैसाका लागि यो खराब प्रदर्शन मात्र थिएन, तर उनीहरूले उपभोक्तालाई बढी सशक्त बनाए। उपभोक्ता बेनामी रहन्छ, प्रमाणको साथ, तपाईंको व्यवसायको बारेमा नकारात्मक समीक्षा लेख्दछ। यसले तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूलाई नक्कली / खराब समीक्षा लेख्न अज्ञात रूपमा अनुमति दिन्छ, र तपाईंको व्यापार प्रतिष्ठा बिगार्न। त्यसोभए येल्पले यसको लागि मलाई month 540० एक महिना तिर्न चाहन्छ ?! मसँग पनि ग्राहकले हामीलाई १ तारा समीक्षा दिएका थिए, केवल किनकि हामी बुक गरीएको थियो, र त्यस समयमा उहाँसँग टेक उपलब्ध थिएन (१०::1०)। हामीले उनीहरूका लागि कुनै काम गरेका थिएनौं, हामी विनम्र थियौं, हामी अगाडि र इमान्दार थियौं। तर १ स्टार समीक्षा प्राप्त भयो किनकि हामी व्यस्त छौं! येल्पले यसलाई हटाउन अस्वीकार गर्‍यो।
जुलाई,, २०१ at 5::2016। बिहान
तपाइँ Yelp प्लेटफर्म मा तपाइँको मनपर्ने कुनै तालिका मा विज्ञापन स्वयं सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यो केवल यदि तपाईं येल्पको साथ सम्झौता बुक गर्नुहुन्छ कि वार्षिक प्रतिबद्धता क्लिक गर्दछ।
व्यवसाय मालिकको रूपमा Biz.yelp.com मा लग इन गर्नुहोस् र तपाईं कुनै पनि रकम वा समय अवधिको लागि विज्ञापनहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले भिडियो प्राप्त गर्नुहुन्न तर तपाइँ विज्ञापनहरू परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई ग्राहकहरूको लागि प्रयोग गर्दछौं।
मिशेल - पोष्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद। के तपाईं मलाई "बुकिंग सम्झौताहरू" बनाम स्वयं सेवा विज्ञापनहरूको गहिराइमा हेराई / बुझ्ने क्षमता दिन सक्नुहुन्छ?
माल्कम रुथवेन मल्कम
सेप्टेम्बर १,, २०११ 27::2016० अपराह्न
मेरो राम्रो निर्णयको बिरूद्ध, म येल्पको साथ कमसेकम तीन महिना, अधिकतम विज्ञापन लागत per १,००० प्रतिमहिना $ early०० प्रारम्भिक रद्द शुल्क सहित चल्ने विज्ञापन अभियानको लागि हस्ताक्षर गरे। मेरो व्यवसाय दिवालियापन कानून हो। म बैंकरप्ट वकिल / वकील हुँ, कानूनको कुनै अन्य प्रकारको नगर्नुहोस्, र येल्पलाई यो कुरा थाँहा थियो। “किराएदार कानून” र “लाइभ स्क्यान फिंगरप्रिन्टि for” को खोजीको लागि उनीहरूले मेरो विज्ञापन (जुन म क्लिकमा भुक्तान गर्दै थिए) चलाउँदै थिए भनेर मैले थाहा पाएको लगत्तै पछि। म यो बनाउदिन!
त्यो धेरै त्रुटिपूर्ण विज्ञापन सेवाको कारण, मैले येल्पलाई सूचित गरें र सेवा रद्द गरें। उनीहरू अगाडि गए र बाँकी दुई महिना ($ 575 र $ १,०००) को विज्ञापन क्लिकको लागि र $ 1,000 रद्द गर्ने शुल्कको लागि मलाई शुल्क लगाए।
मैले मेरो क्रेडिट कार्ड कम्पनीसँग तीनै शुल्क लिइन। # १ शुल्क ($ 1) पूर्ण रूपमा मेरो पक्षमा समाधान गरिएको छ। # २ चार्ज ($ १,०००) अझै प्रगतिमा छ। # Charge शुल्क ($ $०० टर्मिनेसन शुल्क) येल्पको पक्षमा निर्णय गरियो किनभने "यो अनुबन्धमा थियो"! के म यसका लागि मुद्दा हाल्न समय र समस्या लिने छु? शंकास्पद।
येल्प अब सम्मको सबैभन्दा खराब कम्पनी हो मैले कहिले पनि काम गरें। प्रति-क्लिक पूर्ण रिप - अफ। मैले तिनीहरूलाई भ्रामक पाएँ र मैले रद्द शुल्कको बारेमा थाहा पाउन काम गर्नुपर्‍यो। धन्यबाद मसँग केवल तीन महिनाको अनुबन्ध थियो। म धेरै अन-लाइन कम्पनिहरुसँग काम गर्दछु र तिनीहरू पूर्ण छैनन्, तर येल्प मात्र एक मात्र हो जसमाथि म विश्वास गर्दिन।
नोभेम्बर,, २०१ at 3::2016 बिहान
मसँग एक व्यक्ति (मलाई) फायरप्लेस मर्मत गर्ने बिज छ, येल्प रिप धेरै राम्रो थियो र मलाई साइन अप गर्न खोज्ने प्रयासमा धेरै दृढ थियो। मैले उनलाई हरेक चोटि भने जुन हामीले खोज्दै थियौं। यदि व्यक्ति "फायरप्लेस मर्मत र शहर" खोजी गर्छन् भने म देख्छु कि येल्पले "रेन्टनमा सर्वश्रेष्ठ ग्यास फायरप्लेस मर्मत, WA - Yelp" भन्छ र सधैं पहिलो पृष्ठमा हुन्छ। मैले तिनीहरूलाई भने यदि मैले तपाईंलाई पैसा दिएँ भने म पहिलो पृष्ठमा क्रमबद्ध गर्नेछु एक पटक तिनीहरूले येल्प साइटमा क्लिक गरेपछि, मलाई भनिएको थियो मँ। हिजो राती एक खोजी गरे, येल्पमा क्लिक गरियो, जब म पृष्ठ to मा पुगेँ, म त्यहाँ थिए 9०+ व्यापार पछि, म उसको मान्छे पछि पनि आयो जसको बिजसँग हनी-डो हन्डम्यान भनिन्छ, म पक्का छु कि ऊ एक महान मान्छे हो तर साँच्चै? म फायरप्लेस मर्मतमा विशेषज्ञ छु र नतिजाले नतिजामा पिट्छ? रद्द गर्न कल गरियो र मैले यो साइटमा पढेको बाँकी अरू मानिसहरूले जस्तै कथा पाए, निश्चित हुन्थ्यो कि मैले यो पढ्नु पर्छ। मैले भर्खरै मेरो क्रेडिट कार्ड रद्द गरें त्यसैले म २ महिनाको बीएस लाई त्याग्ने आशा गर्दछु जुन कहिले साईन ईन गर्ने क्रममा उल्लेख गरिएको थिएन, र मैले भने कि म यसलाई दुई महिना दिन्छु र हेर्न जारी राख्छु कि भनेर। त्यहाँ मैले कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तरिका छैन, बिक्री प्रतिनिधिलाई अझ स्पष्ट पार्न सक्ने थिएन। मलाई राम्रो थाँहा थियो तर जे भए पनि बेचेको छु। फेरि म मेरो पेटमा विश्वास गर्न बिर्सिएँ, यसको सामना गर्न दिनुहोस्, एक "नॉन-बायस्ट" (एसपी) रेटिंग कम्पनी जुन कम्पनीको लागि डलर थप्दछ, हेलो !!!!!!!! मेरो नराम्रो ……।
डिसेम्बर १, २०१ 29 2016:२:2 अपराह्न
यो छलफल हेर्न पाउँदा खुशी लाग्यो, काश मैले येल्प विज्ञापन कार्यक्रमको साथ हस्ताक्षर गर्नु भन्दा पहिले यसलाई हेरेको भए हुने थियो। हामी विश्वास गर्छौं कि यो कुल घोटाला हो। पहिलो महिना पछि मलाई उनीहरूको एनालिटिक्स र बिल दिइयो जुन दर्जनौं फोन कलहरू मलाई देखाई मलाई थाहा छ हामीले कहिले पनि प्राप्त गरेका थिएनौं: मैले होशियारीका साथ हाम्रो कलर आईडी लगहरू र 75%% कल ट्र्याक गरे जुन हामीले नगरेको हो (मिति / समय / फोन) नम्बर दर्ता गरेन) र धेरैले भने कि कुनै उत्तर थिएन, सम्भव छैन। हामीले फोहोर बिन्ती कलमा ठूलो अप्टिक देख्यौं र यिनीहरू मध्ये धेरैले हाम्रो कल लगहरूसँग मेल खान्छ। यस कारणका लागि हामी उनीहरूको संख्यालाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दैनौं सयौं क्लिकहरूमा हामीले अनुमान गर्यौं कि विज्ञापन लिस्टिंगबाट प्राप्त भयो। हामीले मानिसहरूबाट जेरो कलहरू आएका थियौं उनीहरूले हाम्रो येल्प विज्ञापन र शेरो ग्राहक आदेशहरू देखे। उनीहरूको रद्द नीतिले गर्दा हामी लगभग $ १1400०० को लागि फ्याँकिएको समाप्त भयो केवल घोटालाबाट बाहिर निस्कनको लागि। यसलाई हेर्नको लागि सरल तरिका भनेको उनीहरूले क्लिकको कुनै प्रमाण दिन सक्दैनन् उनीहरूले भन्छन् कि उनीहरूले तपाईको व्यवसायको लागि उत्पादन गर्छन्, जुन उनीहरूले बिलि off अफ गर्ने आधार हो। सावधान रहनुहोस्, सावधान रहनुहोस्, सावधान रहनुहोस्, हामी पक्कै पनि Yelp विज्ञापन कसैलाई रिप-अफ सिफारिस गर्दैनौं।
जोन ओ ब्रायन
जनवरी १, २०१ 25 १२::2017 अपराह्न
सबैभन्दा खराब विज्ञापन उत्पादन! $ २००० भन्दा बढी खर्च भयो र एउटा नेतृत्व छैन। त्यसोभए रद्द गरियो र $ 2000 चार्ज गरियो। कसैलाई सिफारिश गर्दैन, कुनै पनि समय। पूरा ripoff !! यसको बारे कसैसँग कुरा गर्न भनियो र कहिल्यै मेरो कल वा ईमेल फिर्ता गरिएन।
अप्रिल 27, 2017 मा 10: 36 PM
पागल नहुनुहोस्, समात्नुहोस्।
YELP मा व्यवसाय आकर्षित गर्न को लागी नम्बर एक कारक विज्ञापन छैन। यो समीक्षा हो।
त्यसकारण हामीले "वाई" समीक्षा बुस्टरको विकास गर्‍यो - जसले मानिसहरूलाई तपाईको समीक्षा छोड्नका लागि स्न्याप बनाउँदछ। - सबै विज्ञापन को एक महिना को लागत को एक अंश को लागी, समीक्षा को एक बर्ष मूल्य प्राप्त। प्लस समीक्षा सधैंभरि रहन। Yelp मा व्यवसाय निर्माण गर्न उत्तम तरिकाको लागि S स्टार्ट मार्केटिंगसाफ्टवेयरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
जुन 1, 2017 मा 6: 31 PM
म yelp संग एक निःशुल्क परीक्षणको लागि साइन अप, एक हप्ता पछि रद्द भयो जब म योग्य लीडहरू प्राप्त गर्दिन, र तिनीहरूले मेरो कार्ड charged 450 २ महिना पछि चार्ज गर्यो, मैले कहिल्यै रद्द गरेन भनेर। उनीहरूले भने कि मैले तिनीहरूबाट रद्द ईमेल प्राप्त गर्नुपर्‍यो यदि मैले रद्द गरें भने जुन उनीहरूको प्रणालीको सवाल होईन। मैले उनीहरूको बिलि department्ग विभागसँग कुरा गरें, जसले भने कि उनीहरूले मेरो खाता फिर्ता गर्दैनन् र उनीहरूले आज यसलाई रद्द गर्न सक्दछन् ... यो सबै निकै गणना गरिएको देखिन्थ्यो। मैले तुरुन्तै मेरो डेबिट कार्ड कम्पनीलाई कल गरें र उनीहरूले शुल्कको बारेमा छलफल गरे। जब म yelp लाई एक म्यानेजर संग कुरा गर्न फिर्ता बोलायो, ​​उनीहरुले जवाफ दिएनन किनकि उनीहरु भन्छन् कि यो महिनाको पहिलो हो र तिनीहरुलाई बिलि issues मुद्दाहरुले अतिभारित गरियो। म कल्पना गर्न सक्छु! मैले एउटा इनभ्वाइस, ईमेल वा सूचना प्राप्त गरेन जुन मैले यस समयमा बिलि be गर्नु पर्ने थियो, तिनीहरू केवल मेरो कार्ड चलाए। गुगल र फेसबुक लगातार विज्ञापन तपाईं अपडेट पठाउँछन्। येल्पले राम्रो गरिरहेको छैन जस्तो देखिन्छ, र यो ग्राहकहरूको खर्चमा राजस्व स gathering्कलनमा असफल प्रयास हो। उनीहरूको अवस्था सुधार गर्न अभावको साथ खुशी छैन, न त उनीहरूको ग्राहक सेवा। नि: शुल्क वास्तिष्क परीक्षणको लागि साइन अप नगर्नुहोस्! आईटी स्काम हो